Wararkii u danbeeyay ee Muj. Maxamed Kaahin oo isku day dil kaga badbaaday xaafada shacabka ee magaalada Hargeysa | Salaan Media
Wararkii u danbeeyay ee Muj. Maxamed Kaahin oo isku day dil kaga badbaaday xaafada shacabka ee magaalada Hargeysa
Hargeisa 09/11/2013) Wararkii ugu danbeeyay ee ka soo baxay isku daygii dil ee loo geystay Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed – Gudoomiye ku xigeenka Xibiga Kulmiye ayaa shaaca ka qaaday in la qabtay nin ka mid ah sedexdii nin ee weerarka soo qaday oo lagu sheegay nin la yidhaah Maxamed Buur oo loo badinayo inuu yahay nin lagu eedayn jiray inuu ka danbeeyay qabashadii Cabdilahi Askar ee lagu qabtay Hargeysa. Ninka kale ee la yidhaah Khaalid Cabdilahi Falaago ayaa la sheegay inuu ahaa isagu ninka soo abaabulay weerarka oo isaga ilaa hada aan lahayn. Waxaana la sheegay inuu ka cadhooday golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye oo lagu dirwaayey. Maxamed Kaahin ayaa ka badbaaday isku day dil isagoo ku sugan hotel shacabka Hargeysa ku yaala oo la yiraahdo Lake Asal.
Sida wararku sheegayaan waxa Maxamed Kaahin oo ku sugan gudaha barxada hotelka u yimid sadex nin oo qori sitay isla markaasna Madaxa kaga qabtay Muj. Maxamed hase yeeshee markii uu keebka qabtay ayay xabadii ka kedibtay oo ay dhici weyday, markiinbana wuxuu isku deyey ninkii qoriga sitay inuu qoriga ka soo saaro xabada dhuunta fadhiisatay oo uu dib intuu u canbaynayey ay u suurtowday in Muj. Maxamed Kaahiin goobta iskaga cararo oo uu dhexgalo dad tiro badan oo hotelka xiligaas ku sugnaa.
Ciidanka amaanka ayaa markiiba goobta soo gaadhey oo ka bilaabay baadhitaano iyo dabagalo ragii weerarka soo qaaday.
22kii Sano ee ay Somaliland jirtay ayaanay hore ugu dhici jirin isku dey khaarijin toos ah, hase yeeshee sanadkan aynu ku jirno waa markii sedexaad iyadoo hore bishii April la isku deyey in la khaarajiyo gudoomiyaha wargeysaka madaxa banana ee Maxamed Caloolay, halka bishii hore ee October na la isku deyey in la khaarajiyo Xildhibaan Qabile.
Dadka siyaasada ka faalooda ayaa aad ugu eedeynay xukuumada Silaanyo oo ka gaabisay inay wax ka qabato falalkii hore isku dayga dilka ahaa, siiba kii lagu qaaday gudoomiyaha wargeysaka madaxbanaan ee Hubaal bishii April oo ninkii xaada ku riday iyo baastooladiisiiba la isku qabtay hase yeesheen aan wax maxkamad ah aan la horegeynin. Waxaana la sheegay inay taasi suurtogelisay in lagu soo dhiirado in suuqa dhexdiisa maalin cad la isku khaarijiyo, hadaan falkan dhacay siduu sharcigu dhigayo aan loo marin wax la arkidoonaan falal noocan oo kale ah oo dalka ku soo bata mustaqbalkan keeni karta in dad lagu dilo .
Ilaa hada xukuumada iyo xisbiga Kulmiye ayaan ka hadlin falkan saaka ka dhacay wadnaha magaalada Hargeysa.
Waxa wax lalayaabo ah website yada qaarkood oo warka u tebiyey sidii arin qabyaalad oo kale ah iyagoo soo gudbinaya hadalo laga soo qaaday dad ku nool gobolada bariga Somaliland. Hase yeeshee falkani aanu ahayn mid reernimo iyo mid magaalada Hargeysa lagu eedeeyo toona ee ay tahay arin ay fuliyeen denbiilayaal u baahan in sharciga la horkeeno.